Iinqwelo-moya zaseMelika zihlangana ngokudibana kwindiza yaseJamaica
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseJamaica zokuPhula » Iinqwelo-moya zaseMelika zihlangana ngokudibana kwindiza yaseJamaica
Airlines • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Caribbean • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zaseJamaica zokuPhula • iindaba • Ukwakha kwakhona • Tourism • uthutho • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Umphathiswa Wezokhenketho waseJamaica, Hon. U-Edmund Bartlett (ngasekunene) ubulisa uSekela Mongameli, ukuThengiswa kweHlabathi, I-American Airlines, uKyle Mabry, kwikomkhulu labo eDallas, eTexas ngoLwesine we-23 Septemba 2021.
Abaphathi beenqwelomoya ezinkulu ehlabathini - IAmerican Airlines - baxelele uMphathiswa Wezokhenketho u-Hon. U-Edmund Bartlett kunye namanye amagosa aphezulu kwezokhenketho eJamaican kwintlanganiso ngoLwesine kwikomkhulu labo elise-Dallas, eTexas, ukuba ilizwe lesiqithi ngoDisemba liza kubona iinqwelomoya ezili-17 ezingapheliyo ngosuku, njengoko imfuno yendawo ekuyiwa kuyo inyuka.
I-American Airlines iqinisekisile ukuba iza kusebenzisa iinqwelomoya ze-Boeing 787 kwiindlela eziphambili eziya eJamaica ukuqala ngo-Novemba.
Iinqwelomoya ezihamba yonke imihla phakathi kweKingston neMiami zonyuka ukusuka kwinye ukuya kwe-3 ngoDisemba kunye ne-3 yeenqwelo moya ezingamisiyo ngeveki eyongezwe phakathi kwePhiladelphia neKingston.
Ukhenketho lwaseJamaica lubambe iintlanganiso neenkokheli zeshishini lokuhamba kwiimarike ezinkulu zaseJamaica, eUnited States naseCanada.
Bakwabonakalisile ukuba Jameyikha ngaphezulu kweCaribbean phakathi kwabathengi kwiqonga labo leeholide leAmerican Airlines kwaye baqinisekisa ukuba baya kusebenzisa iinqwelomoya zabo ezintsha, ezinkulu, ezinomzimba obanzi weBoeing 787, kwiindlela eziphambili eziya eJamaica ukuqala ngoNovemba.
UBartlett wajoyina uMlawuli wezoKhenketho, uDonovan White; IQhinga eliPhezulu kwiCandelo loMphathiswa Wezokhenketho, uDelano Seiveright kunye noSekela Mlawuli wezoKhenketho kumazwe aseMelika, uDonnie Dawson. Bona, kunye noSihlalo weBhodi yabaKhenkethi baseJamaica (JTB), uJohn Lynch, babambe uthotho lweentlanganiso kunye neenkokheli zeshishini lokuhamba kwiimarike ezinkulu zaseJamaica, eUnited States naseCanada. Oku kwenzelwa ukwandisa ukufika kwabo bazakufika kwezi veki neenyanga zizayo, kunye nokukhuthaza utyalomali olongezelelekileyo kwicandelo lokhenketho lwasekhaya.
Umphathiswa Wezokhenketho, u-Hon. U-Edmund Bartlett, (3rd ekunene) wabelana ngomzuzwana noKyle Mabry, uSekela Mongameli, ukuThengiswa kweLizwe, iAmerican Airlines (2nd ekunene); UMarvin Alvarez Ochoa, uMphathi weNtengiso weCaribbean, iAmerican Airlines (3rd ngasekhohlo); UDonovan White, uMlawuli wezoKhenketho, (2 ngasekhohlo); UDelano Seiveright, uMcebisi oMkhulu kunye neQhinga, uMphathiswa wezoKhenketho (ekhohlo) kunye noDonnie Dawson, uSekela Mlawuli wezoKhenketho kumazwe aseMelika (JTB). U-Bartlett ukhokele intlanganiso nabaphathi abaphezulu be-American Airlines kwikomkhulu labo eDallas, eTexas ngoLwesine we-23 Septemba 2021.
Iindaba ezamkelekileyo ziza ngaphandle kokucothisa imfuno yokuhamba ebangelwe kukusasazeka kweDelta eyahlukileyo ye-COVID-19.
Kwiindaba ezamkelekileyo kubahambi baseKingston, i-airline iqaphele ukuba baya kulonyusa inani le iinqwelomoya mihla le phakathi kweKingston neMiami ukusuka kwindawo yangoku ukuya kweyesithathu ngoDisemba kwaye babonelela ngeenqwelomoya ezintathu ezingamisiyo ngeveki phakathi kwePhiladelphia neKingston.
Iinqwelo-moya zinika iinkonzo ezingapheliyo phakathi kweJamaica kunye needolophu zaseMelika eMiami, ePhiladelphia, eNew York JFK, eDallas, eCharlotte, eChicago naseBoston.
Ubugcisa baseAsia butshisa imarike yehlabathi
IRoyal Caribbean 'yahamba ngenqanawa ukuya ndawo' yagxothwa ...
Isivumelwano esitsha samkelwe ngamxhelo mnye yiPan Pacific ...
Amatikiti eenqwelomoya zasimahla: eOntario ukuya eReno-Tahoe
Umntu omnye kwabahlanu waseBritane waligatya icebiso ngokuchasene nohambo lwangaphandle
IiNgxaki zoKhenketho kunye noBuyiselo lweNdawo: Kufuneka kutsha...